खुल्यो पाँचथर हत्याकाण्डाको थप रहस्य, यसरी भएको रहेछ ९ जनाको विभत्स हत्या - Nepal Insider
Home/समाचार/खुल्यो पाँचथर हत्याकाण्डाको थप रहस्य, यसरी भएको रहेछ ९ जनाको विभत्स हत्या
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ आरुबोटेमा ९ जनाको सामुहिक हत्याको प्रारम्भिक कारण सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) देखिएको छ ।
झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका मानबहादुर धनराज शेर्माका साढुभाइ र बमबहादुर फियाकका कान्छा ज्वाई रहेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी केदार रिजाल भन्छन् हाम्रो अनुसन्धानमा मानबहादुर मारेको देखिन्छ तर पोष्टमार्टम रिपोर्ट नआए सम्म ठोकुवा गर्दनौ ।
मानबहादुरले धनराज र बमबहादुरको परिवारले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिन उचालेको आरोप लगाउँदै आएका रहेछन् । त्यही झोंकमा उनले सबैको हत्या गरेका हुनसक्छन् । यसरी गरे पालैपालो हत्या रातको समयमा परिवारका सबै सदस्यमाथि जथाभाबी खुकुरी चल्यो । आक्रमण भएपछि भागेर बाँच्न सफल भएकी १२ वर्षीया बालिका सीता खुजुमले मुकुण्डो लगाएको व्यक्तिले खुकरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीलाई बयान दिएकी छन् ।
हत्या गरिएका परिवार र रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका मानबहादुर सामान्य परिवारका व्यक्ति थिए । घटना मध्यरातमा भएको थियो । त्यस कारण पनि छरछिमेकले घट्ना बारेमा अत्तोपत्तो थाहा पाएनन् । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ को आरुबोटेमा सोमबार राति दुई परिवारका नौजनाको हत्या भएको छ । ससुराली बमबहादुर फियाक र ज्वाइँ धनराज शेर्माको परिवार लगभग सखाप भएको छ ।
दुई परिवारको हत्यामा अर्का ज्वाइँ मानबहादुर मोखिमको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर, मानबहादुर पनि मूख्य घटनास्थल २५ किलोमिटर टाढा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् ।मानबहादुरसँग मोटरसाइकललगायत कुनै सवारीसाधन नभएको स्पष्ट भएको छ । तर, सोमबार राति ससुरा र ज्वाइँको घरमा सुतेको नौजनाको हत्या गरेर मानबहादुर बिहान हुनुअघि २५ किलोमिटर टाढा कसरी पुगे ? प्रहरीले जवाफ दिन बाँकी छ ।
उब्जिएका सात प्रश्न
नौजनाको हत्या गरेर मानबहादुर कसरी २५ किमि टाढा पुगे र आत्महत्या गरे ?, सिलाइ–कटाइ तालिमको खाजा खाँदा नुनमा सिसा कसले मिलायो ? खानामा सिसा, सामूहिक हत्याको प्रयास, तर प्रहरीले किन अनुसन्धान गरेन ?, मात्र एकजनाको खुकुरीले नौजनाको हत्या गर्दा छिमेकीले कसरी थाहा पाएनन् ?,हत्यारा ठानिएका मानबहादुरको पनि ‘आत्महत्या’ तर तीनवटा टिसर्टमा रगत, हत्यामा संलग्न भनिएका मानबहादुरको झोला र शव दुई किमि टाढा, खुकुरीले हानेर नौजनाको हत्या गर्ने मानबहादुरको शरीरमा रगतको निसान छैन ?
२५ वर्षअघिको झझल्को
दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटे शोकमा डुबेको छ । घटनाका दोषी आशंका गरिएका खजुम समेत रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । पाँचथरमा आज भन्दा २५ बर्षअघि घटेको यस्तै सामुहिक हत्याले त्रसित बनाएको थियो । नेकपा पाँचथरका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी भन्छन ‘२०५० साल १७ वैशाखमा दुलाल परिवारका पाँच सदस्यको यसरी नै सामुहिक हत्या गरिएको थियो ।
गायिका सिन्धु मल्ल श्रीमान सहित मिडियामा, गीत गएरै करोडौको घर (भिडियो सहित)